Chinja Pro: Tungamira Chizvarwa & Email Sarudza-MuPopup Plugin yeWordPress | Martech Zone
Kupiwa kutonga kwe WordPress seyemukati manejimendi manejimendi, zviri kushamisika kushomeka kwekutarisirwa kuri kubhadharwa mupuratifomu yepamoyo pane chaiko kutendeuka. Anenge mabhuku ese - kungave riri bhizinesi kana rako bhurogu - rinotarisa kushandura vashanyi kuva vanyoreri kana tarisiro. Nekudaro, hapana chaicho zvinhu mukati meplatform chikuva chekutora chiitiko ichi.
Shandisa Pro yakazara yakazara WordPress plugin iyo inopa yekudhonza & kudonhedza mupepeti, nhare dzinoteerera maficha, uye plugin isingazodhonze kumhanya kweiyo yako WordPress saiti pasi. Iyo plugin inopa izere dhizaini dhizaini, hunhu hunokonzeresa, ine toni yekubatanidzwa, uye toni yeakanaka matemplate kutanga nawo.
Dhawunirodha Shandura Pro yeWordPress
Chinja Pro - Email Opt-In uye Lead Generation Plugin
Shandisa Pro ndiyo yakapusa uye inoshanda yeWordPress popup plugin iyo inogona kushandiswa nevatengesi vepamhepo, mabloggi, e-commerce mawebhusaiti, vanogadzira uye mamwe ese madiki uye makuru mabhizimusi ayo anoda kuwedzera shanduko pamawebhusaiti avo. Zvimiro zvinosanganisira:
Buda Pakati Pehunyanzvi - Ne Convert Pro iwe unogona kubata nyore nyore kusiya vashanyi. Dhizaini uye nekunyepedzera mameseji anobata kutarisa!
Nyore A / B Kuedzwa - Iyo A / B bvunzo ficha yeConvert Pro inoita kuti iwe ugadzire akasiyana, kuvaedza, uye chengeta izvo zvinoshanda zvakanyanya kune vateereri vako.
Multi-Nhanho Popups - NeConvert Pro, unogona kugadzira akawanda-nhanho popups senge zera rekusimbisa popups, ehe kwete popups, uye zvimwe zvakawanda!
Kunyatsoteerera - Chinja Pro inoteerera zvakakwana. Zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa uchishandisa iyi plugin mudziyo, mushandisi, uye Google zvine hushamwari.
Pane Dzvanya Popups - Kunze kwesarudzo hombe yezvinokonzeresa, unogona zvakare kugadzira popups dzinoonekwa kana vashandisi vadzvanya pane zvinyorwa, mufananidzo, bhatani, nezvimwe.
Yepamberi Targeting - Shandisa Shandura Pro uye gadzira yakasarudzika mameseji ayo anogona kuratidzwa panguva yakakodzera, pamberi pevateereri chaivo.
Email Kubatanidzwa - Chinja Pro inoshanda musheedhi neese makuru ma auto-anopindura uye eemail ekushambadzira vanopa. Uine yakasarudzika kupinza & kutumira kunze basa, yako yakakosha email data ikozvino inoshanda uye nekukurumidza. Kamwe kubatanidza kubatanidza kunoita kuti zvive nyore kushanda pakumisikidza nekukurumidza kutora uye kubata data rekutungamira.
Shandisa Pro yakasimba plugin iyo ichakubatsira iwe kuvaka email zvinyorwa, kutyaira traffic, kukurudzira mavhidhiyo, kukurudzira zvinopihwa, uye kushandisa zvakanyanya kushambadzira kwako kushandisa. Kana iwe uchitsvaga yekushambadzira chishandiso seichi, Shandura Pro ndiyo inodhura sarudzo!
Chinja Pro Email Popup Kubatanidza
Kubatanidzwa kunosanganisira ActiveCampaign, AWeber, Benchmark, Campaign Monitor, Campayn, CleverReach, Constant Contact, ConvertFox, ConvertKit, Customer.io, Drip, ElasticEmail, GetResponse, Hubspot, iContact, Infusionsoft, Klaviyo, Mad Mimi, MailChimp, MailerLite, Mailgun, Mailjet, MailPoet, Mailster, MailWizz, Mautic, Moosend, ONTRAPORT, SendFox, SendGrid, SendinBlue, Sendlane, SendReach, Sendy, SimplyCast, TotalSend, VerticalResponse, uye Zapier.
Tags: ab testActiveCampaignAWeberChiratidzoCampaign MonitorCampaynCleverreachConstant Contactshandura proShanduraFoxShanduriKitMutengi.iodonhaElasticEmailGetResponsehubspotiContactInfusionsoftKlaviyoMad MimimailchimpMailerliteMailgunmailjetMailPoetMailsterMailWizzMauticMoosendyakawanda-nhanho popupon-tinya popupszvideobudapopup inotarisaSendFoxSendgridSendinBlueSendlaneSendReachSendySimplyCastTotalSendvertical kupinduraWordPressWordpress popup pluginzapier